WikiLeaks agakwaghị enwe ike iji akaụntụ Coinbase ya Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | Ego, Noticias
Nnukwu ihe ndọghachi azụ maka WikiLeaks. Ebe ọ bụ na a na-egbochi akaụntụ ha nwere na Coibase. Mkpebi na-anọchite anya nnukwu nsogbu maka ịkwụ ụgwọ weebụsaịtị. Na nke ahụ nwere ike iweta nsogbu ole na ole maka ikpo okwu. Ihe kpatara igbochi na imechi akaụntụ ahụ bụ n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ ga-agbaso iwu United States.
Ebe ọ bụ Ngalaba na-atụnye ego na United States na-arịọ ka ọ ghara inwe ụlọ ọrụ nwere WikiLeaks nwere ego. Kemgbe nke ikpeazụ raara nye nzacha ọtụtụ ozi dị nro, ma na gọọmentị ma site na ndị nnọchi anya mba. Ya mere, Coinbase kwadoro iwu ọhụrụ ahụ.
Dị ka a tụrụ anya, ozugbo emere mkpọchi a ka ọ bụrụ ọkwa, Julian Assange akpọọla soshal midia ka ndị ọrụ weghara Coinbase. Arịrịọ nke na-adịchaghị ka ọ ga-enwe obere mmetụta. Mana nke ahụ na-egosipụta nnukwu nsogbu maka ikpo okwu.
Otú ọ dị, igbochi akaụntụ WikiLeaks apụtaghị na ha kwụsịrị ịnakwere ma ọ bụ jiri Bitcoin. Nwere ike ịga n'ihu na-eji cryptocurrency na-enyefe na n'elu ikpo okwu na-enweghị aha. Nsogbu bụ, Coinbase bụ nnukwu enyemaka na ime ka usoro a dị mfe.
Nke a bụ otu nsogbu ọzọ maka WikiLeaks, nke na-anwale ụdị ngwọta dị iche iche ruo ọtụtụ afọ iji nwee ike ịkwado onwe ya na ịkwụ ụgwọ onwe ya. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile na-arụ ọrụ nke ọma. Ọbịbịa nke cryptocurrencies abụrụla ohere maka ha, nke dị ka ọ na-ejere ha ozi ruo ugbu a. N'ezie, Assange asịrị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke Bitcoin, nke mere na o nwere ike ịbụ nde mmadụ.
Ya mere, cryptocurrencies abụrụla ihe ha ji enweta ego n'oge a. Ma, ọ bụrụ na Assange gbanwere Bitcoins ndị a ka ọ bụrụ ego, ọ na-abanye na iwu gọọmentị, naanị ihe ọ chọrọ izere. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na WikiLeaks na-ekwupụta ụzọ ọzọ e si enweta ego mgbe mgbochi Coinbase a gasịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Coinbase na-egbochi akaụntụ WikiLeaks
Egwuregwu nwere Xbox Gold ịtụnanya na Metal Gear Solid V: nke Phantom Pain